Ngendlela efanayo, umqondiso wakho weenkwenkwezi ukunceda ukuba uqonde ubuntu bakho kunye neempawu zomlingiswa, kunjalo ke amanani endlela yobomi kwinombolo. Ukwazi ukuba yintoni inombolo yakho kuya kukunika ukuqonda okungcono kwindima yakho kobu bomi, ixabiso lakho, amaqabane afanelekileyo, ukhetho lomsebenzi kunye neendidi zemiceli mngeni onokuthi ujongane nayo. Ungafumanisa ukuba yeyiphi inombolo yendlela yobomi bakho ngokulinganisa okulula kwezibalo. Okanye ukuba ufuna ukufumana iprofayili yakho yeenombolo ezipheleleyo, kwaye ufunde ngamanye amanani akho (ukukhuthaza komphefumlo, ubuntu kunye neenombolo zekamva) emva koko ucofe apha kufundo lwasimahla lwenombolo. Iphonononga iprofayili yakho yokubhula ngamanani, ikunceda ubuqonde ubomi bakho ngokusebenzisa iimfihlelo zokubala amanani.
Makhe sijonge kwindlela yobomi emithandathu. Ulungele?
Indlela yobomi yeNombolo yesi-6 yoBuntu neempawu
Indlela yobomi Uthando, ukuthandana kunye nobudlelwane
Indlela yobomi 6 ukuhambelana ngokuthandana
Uninzi lweeNombolo ezihambelanayo ze-6
Amanani aHambelanayo aMncinci a-6
Indlela yobomi 6 Umsebenzi kunye neShishini
Ukuhamba kunye nokuzonwabisa kwiNdlela yoBomi yeNombolo 6
Indlela yoBomi 6 yezifundo kunye noCelomngeni
Ngokutsho kwitshathi yokubhula ngamanani, abantu abanendlela yobomi engu-6 abakhulisi abathatha uxanduva lwabanye. Eli nani likumama liyakhathala, luthando, luthembekile, kwaye liyiqonda ngendlela emangalisayo, ngomnqweno onamandla wokuthanda nokuthandwa.
Amathandathu ajolise kuwo usapho okanye ekuhlaleni kunye nokufumana intsingiselo kwinkonzo kwabo babangqongileyo. Kodwa, ukwenza into elungileyo (ngeyona ndlela intle yelizwi), kubalulekile ukuba bangaphazamisi kakhulu, kwaye babe ngabaphazamisi ngakumbi kunokuba babe luncedo.
6s ngovuyo hamba imayile eyongezelelweyo kuye nawuphina umntu osweleyo, kodwa eyakho Uhlobo lwesisa ngamanye amaxesha lunokubonwa njengokuzincama . Ukuze uzive ngokungathi wenza umahluko kubomi babantu obakhathaleleyo, kufuneka wazi ukuba ilixesha lokuba uthabathe inyathelo.
Njengo-6, wabelana ngendlela efanayo yokuphila nabantu abadumileyo abathandekayo. Babandakanya uRobert De Niro, uGalileo Galilei, uEddie Murphy, uSylvester Stallone, u-Eleanor Roosevelt, uThomas Edison, uJohn Lennon, uStevie Wonder, u-Albert Einstein, uMichael Caine, uGeorge W. Bush, uBen Affleck, uClaire Danes, kunye noVictoria Beckham.
Kunzima ukufumana inani elinenkathalo okanye elinothando ngakumbi kwitshathi yobomi yokubhula ngamanani kuneminyaka eyi-6. Baziwa ngokufudumala kunye nendalo yesisa, abantu abakule ndlela yobomi abazicingeli kwaye baya kwenza nantoni na ukuqinisekisa iimeko ezibangqongileyo. evumelanayo .
Baya kuya eziphelweni zomhlaba gcina uxolo Kwaye bonwabile xa banokunceda usapho, abahlobo, okanye uluntu. I-6s inoxanduva, isigulana, kwaye inqanaba lentloko, kwaye inokuhlala izolile xa abanye bewa bodwa.
Kodwa, ukuba abahoyanga, inombolo entle yesi-6 Uhlobo lwesisa lunokubuyisela kubo . Abantu abasweleyo bayatsaleleka kumoya wakho wokondla, nakwimfuno yakho yokulungisa zonke izinto ezingalunganga, ngaphambi kokuba wazi, unokuzifumana uxhamla.
Njengokuba uthanda ukupha, ufuna ukwamkelwa ngezenzo zakho ezilungileyo, kwaye ukuba ezi azinakuqwalaselwa, ungaphuhlisa into eyaziwa njenge umfel 'ukholo . Oku kunokukushiya uziva ayixatyiswanga kunye nenzondo.
Xa oku kusenzeka, ihlala iyimpawu ekufuneka uyenzile thatha ikhefu ekuzincameni ngenxa yabanye kwaye uzonwabise kancinci 'kuwe' ixesha. Nangona oku kuchasene nengqolowa yokuba ungubani, kuya kufuneka uphinde uphinde uphinde ubuyele kwinjongo yobomi bakho yokupha kunye nokunceda.
Ukufumana ulwazi olunzulu malunga neempawu kunye neempawu zakho, jonga kwamanye amanani kwitshathi yakho yokubhula. Umphefumlo wakho uyabongoza, intetho kunye neenombolo zekamva zonke zibumba iprofayili yakho yokubala ngamanani. Ukufumana itshathi epheleleyo yokubala, cofa apha ukuze ufunde simahla. Yenzelwe igama lakho kunye nomhla wokuzalwa.
uyigcina njani indoda yegemini inomdla
Abantu abanendlela yobomi engu-6 baneempawu ezintle. Waziwa ngokuba:
Njengoko kulindelekile, akukho mntu ugqibeleleyo, nkqu nenombolo yentliziyo entle.
Utyekele ekubeni nobunzima obuphezulu
Kuba banako ukukhupha ezona zibalaseleyo kwabanye, akukho manani maninzi kakhulu manani angathandathu angahambelaniyo. Njenge umondli kwaye umkhathaleli , unika usapho kunye neqabane lakho imvakalelo yokwenene yokhuseleko. Kwaye, wena ngokwakho uyazi ukuba bafuna ntoni kwaye bafuna ntoni, ngaphandle kokuba bayicele.
Ilumkiso, nangona kunjalo, kuba uyakuthanda ukufuneka, unga zifumane utsala amaqabane efuna ukuhlangulwa rhoqo. Ubudlelwane obunje buya kukunika injongo oyifunayo okwexeshana. Okwangoku, ayigcineki, ngakumbi ukuba umntu akahlangulwa, okanye abafuni kuhlangulwa, ungaphela uziva ikhutshiwe , kunye nenzondo.
Njengoko besitshilo, ii-6s zinokuhamba kakuhle ngawo onke amanani akwitshathi yokubala, kodwa kukho ezimbalwa ekuya kuba lula ukuzigcina. Amanani 1, 2, kunye no-9 yimidlalo yothando emikhulu enoku-6.
Xa kufikwa kwezothando , amanani 1 no-9 ngamaqabane afanelekileyo ezintandathu. Bobabini banokuzimisela kunye nokuqhuba ukuze baphumelele, kwaye ukonwabele kakhulu ukubanceda bafezekise iinjongo zabo. Bathanda uthando oluvela kuwe, kwaye ngenxa yoko, unokuziva ufuneka ngendlela elungileyo neyanelisayo.
Indlela yobomi yenombolo yesi-2 yile unovelwano nenkathalo , kwaye kuba nobabini niyakwazi ukuthetha ngemiba, mancinci kakhulu amathuba okungavisisani okanye ukulwa ukuqhekeka phakathi kwenu nobabini. Njengawe, i-2 inothando kwaye iyathandana ngokwenyani entliziyweni. Ngelixa ubenza bazive bethandwa yimithwalo yothando, baya kukhupha zonke iindawo zokumisa ngeedinala zokutya, iintyatyambo ngenxa yokuba kunye neendlela ezimangalisayo zokubaleka.
Into ekufuneka uyiqaphele kubudlelwane bezothando yimfuno yakho rhoqo kumama. Nangona amanye amaqabane aya kulivuyela eli cala lenina, inokuba yingxaki xa umama wakho eqala ukufumana ismothering.
Ukucaca ngakumbi kubomi bakho bothando, fumana amanye amanani kwitshathi yakho yokubhula ngamanani. Umphefumlo wakho uyabongoza kunye neenombolo zekamva zisebenza kunye nenombolo yakho yendlela yokuphila ukwenza isantya esitsala amaqabane athandanayo ebomini bakho. Ukufumana itshathi epheleleyo yokubala, cofa apha ukuze ufunde simahla. Isekwe kwigama lakho kunye nomhla wokuzalwa.
Nangona kuyinto eqhelekileyo kumendo wobomi wenombolo 6 ukufumana amaqabane ahambelanayo naphi na apho baya khona, i iibhondi ezinamandla zinamanani 2 kunye ne-9.
Aba babini kunye nabathandathu banolwimi oluthile lothando, apho bakhokelwa ngakumbi ziintliziyo zabo ngaphezulu kweengqondo zabo. Bayancedisana kakuhle, kunye ne-6 ekubeni ijolise kakhulu kusapho ngelixa eyona njongo ye-2 kukuthanda nokukhathalela abo babangqongileyo.
Ingxaki kolu lwalamano lubonakala lufezekile ziimfuno ezi-6 ezihlala zikhona imvume .
Kuwo onke amanani akwitshathi yokubhula ngamanani, isi-6 asihambelani 3 , 5 , Kwaye 7. Kwaye isithathu ubuncinci kunokwenzeka ukuba senze naluphi na uhlobo lobudlelwane.
I-5 kunye ne-6 inokusebenza njengesiqabane, kodwa iya kusebenza thatha ulwalamano oluninzi kuni nobabini , lonke ixesha. Kwaye kwabanye abantu, xa ubudlelwane buziva ngathi ngumsebenzi onzima, mhlawumbi ayifanele. I-5 ikwi-element yabo xa baziva bekhululekile, kwaye ukuba abacwangcisi i-adventure yabo enkulu elandelayo, basenokuba bayayihamba. Ukuze olu lwalamano lusebenze, aba-5 bayakudinga ukuyeka ulawulo kancinci kwaye bayeke ukuhlala befuna ukuphatha. Yindlela yokupheka yentlekele xa kungekho namnye ofuna ukuzinikela kancinci ngenxa yolwalamano.
Nangona kuninzi khemistri yesini phakathi kunye neendlela zobomi 6 kunye 7, indibaniselwano yile egcwele iingxaki macala onke. Ngelixa i-6 ifuna ubudlelwane obuluqilima, nendlu, uthango lweepokethi, kunye nabantwana, i-7 ayizukuvela njengoko befuna.
Kwakhona, indlela yobomi 6 ilawula kakhulu i-7, eyedwa kwaye engenisa ngaphakathi. Ngokutyhala ngokuzeleyo, olu lwalamano lunokusebenza, kodwa ukunyaniseka, kuya kuthatha ukwaneliseka okukhulu kuni nobabini. Kwaye ngenxa yoko, unokugqibela ngokuthandana nombono womntu, kunokuba uthandane nabo.
Okokugqibela, khumbula ukuba ukungqinelana kuthathela ingqalelo ngakumbi ukuba amanani endlela yobomi. Unenombolo yexesha elizayo, intetho, ukukhuthazwa komphefumlo kunye nenombolo yobuntu. Ukudityaniswa kwala manani kudala iplani yokuhambelana kothando lwakho. Ukufumana la manani, cofa apha ukuze ufunde ngokuma kwamanani. Iya kubala amanani akho asisiseko ngokusekelwe kwigama lakho kunye nomhla wokuzalwa.
Unempawu ezininzi ezikuvumela ukuba ube uphumelele kwishishini . Kwaye ngelixa wena (okanye abanye) usenokungacingi, uya kwenza kakuhle kwindima yobunkokeli yohlobo oluthile. Kungenxa yokuba unomdla omangalisayo kwaye uyazi ukuba baziva okanye bacinga ntoni oogxa bakho.
Abantu abanendlela yobomi engu-6 nabo ilungele ukukhuthaza abanye ngokubhenela kwiimvakalelo zabo . Indlela obenza ngayo ibenza bazive ngathi basezandleni ezilungileyo, kwaye bayakuthemba.
Ambalwa kakhulu amanani akwitshathi yokubhula ngamanani akanaloyiko njengawe xa kusenziwa ukuthatha uxanduva emsebenzini.
Ujolise kwaye uzimisele kwaye usebenze ngcono kunabaninzi abaphantsi koxinzelelo. Unotyekelo lokuba yinto encinci yolawulo (kodwa ubuyazi le nto sele ikho), kwaye uya kuhlala ubuyisa imisebenzi oyinike abanye ukuba ayenziwanga kwimigangatho yakho engqongqo.
Ukuba ungathatha izakhono zakho ezininzi kwaye sebenza nabo ukuze kuzuze wena , Uya kuphumelela phantse kuwo onke amabakala, nokuba kunjalo njenge-CEO yenkampani yezizwe ngezizwe, umbutho omncinci ongenzi nzuzo, okanye nokuba ngumenzi wekhaya.
Umceli mngeni wakho kukuzama ukulinganisela ukungazicingeli kwakho kwaye wazi xa ilixesha lokuba uzicingele kancinci ukuze ungadideki okanye uthathe umfeli-nkolo.
Ambalwa kakhulu amanani kwitshathi yokubhula ngamanani akanaloyiko njengawe xa kuziwa ekuthatheni uxanduva emsebenzini. Ujolise kwaye uzimisele kwaye usebenze ngcono kunabaninzi abaphantsi koxinzelelo. Unotyekelo lokuba yinto encinci yolawulo (kodwa ubuyazi le nto sele ikho), kwaye uzakuhlala ubuyisa imisebenzi oyithumeleyo kwabanye ukuba ayinakwenziwa ekufuneni kwakho imigangatho .
Isilumko somsebenzi, uya kwenza kakuhle njengomsebenzi okhathalela abantwana, umsebenzi oxhasayo, ongenzi ngeniso, umqeqeshi wobomi, oncedo, wezendalo, owamkela iindwendwe, abantu okanye umsebenzi wezilwanyana olungileyo, umphilisi, umongikazi, injineli, umpheki wezonka.
Ukuba awuhlangani nayo nayiphi na kwezi zinto zingasentla, mhlawumbi kungenxa yokuba umphefumlo wakho unxusa okanye inani lesiphelo lingqubana nenombolo yomphefumlo wakho. Iimpikiswano phakathi kwamandla wamanani ziqhelekile, ukubona ukuba ziyakukuchaphazela na, cofa apha ukuze ufunde ngenani lasimahla eliya kuthi liphonononge onke amanani akho ngokunzulu.
Akufanele kumangaliswe kukuba i-6 bonwabe kakhulu ekhaya, bengqongwe ngabantu nezinto abazonwabelayo . Ukubakhupha kwindawo yabo yokuthuthuzela kuya kuthatha uninzi lweempembelelo, kodwa bakuba bephumile endlwini, bazimisele ngokupheleleyo kwi-adventure entsha.
Njengenkohliso yenkcubeko evunyiweyo, iholide ene-6 iya kubandakanya ukutyelelwa kwimidlalo yomculo, iikhonsathi kunye namava okupheka, kodwa masijongane nayo, ukuba kukho uhambo, ube nelona galelo likhulu kucwangciso . Kwiintsuku ezimbalwa zonyaka, kuyakwenza umhlaba olungileyo ukugqithisela uxanduva komnye umntu ukuze ukhululeke kwaye uhlaziye.
Ii-6s ziya kufumana izinto zokuzonwabisa ezibanceda ukuba bafumane intsalela abayifunayo ukuze basebenze ngokusemandleni abo, Iindidi zezinto zokuzonwabisa oza kuzonwabela ukwenza igadi, udongwe, ukunitha, ukudanisa, ukubhala umculo okanye ukuba yimvumi, kunye nokupheka.
Omnye wemiceli mngeni emikhulu ajongene nayo kukukwazi balungelelanise imeko yabo yoxanduva . Ngenxa yokuba ungakhawuleza ukudlala ikhadi lexhoba, akufuneki uthathe kakhulu. Kananjalo, xa uziva ngathi utyeshelwa, unokuziva ungaphezulu koku kukungqonge kwaye uthathe umoya ukuzilungisa.
Amathandathu anokulawulwa kukuphambana, kwaye awulunganga ngokukodwa ekuthatheni iingcebiso kwabanye. Eyakho yeyokuba ufuna ukwenza umsebenzi ngokufanelekileyo, emva koko zenzele ngokwakho umhlaba, kodwa owakho umnqweno wokuziva ungabalulekanga inokukubuyisela. Ukuchazwa njengolawulo olunqabileyo, ulwela ukuthatha imiyalelo kwabanye. Le yinto ekufuneka uyazi kwaye ugcine ujonge kuyo.
Xa unokuyeka indlela izinto ekufuneka zenziwe ngayo (ngokutsho kwakho) kwaye ujonge ekubeni nemfesane kunye nokukhathalela, uya kufumana ulwaneliseko ebomini bakho.
UMihael, iNgelosi yoMgcini efuzisela uthando lwenene
Yeyiphi eyona Powder ilungileyo yeCaca kwiNtengiso?
iimpawu zodiac njenge
ukufumana intsiba emhlophe
ukulukuhla indoda ye-gemini
Itshathi entsha ye-zodiac 2016